သင်ကဓာတုဗေဒအတွက်ပါရဂူဘွဲ့ Get သငျ့ပါအဘယ်ကြောင့်
အဆိုပါ Ph.D ဘွဲ့ကိုများအတွက် Going
သင်တစ်ဦးအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင် ဓာတုဗေဒ သို့မဟုတ်အခြားသိပ္ပံအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း, သငျသညျ သာ. မာစတာဘွဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘွဲ့မှာရပ်တန့်ထက်, သင့်ဒေါက်တာဘွဲ့သို့မဟုတ် Ph.D ဘွဲ့ကိုလိုက်စားထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်မျိုးစုံကိုအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်:
တစ် Ph.D ဘွဲ့ကို Get ရန်အကြောင်းပြချက်များ ဓာတုဗေဒအတွက်
ပိုက်ဆံ - အဆင့်မြင့်ပညာရေးများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းပြချက်နှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြပါစို့။ Terminal ကိုဒီဂရီရှိခြင်းကြီးနှစ်ကောင် (ပါဘူးဝင်ငွေလိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်မရှိပါ ပိုက်ဆံများအတွက်သိပ္ပံသို့အရ ), ဒါပေမယ့်ပညာရေးအပေါ်အခြေခံပြီးလစာတွက်ချက်အများအပြားပြည်နယ်များနှင့်ကုမ္ပဏီများရှိပါတယ်။ အဆိုပါပညာရေးအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရေတွက်လို့ရပါတယ်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်တစ် Ph.D ဘွဲ့ကို နေပါစေသူသို့မဟုတ်သူမရှိပါတယ်ဘယ်လောက်အတွေ့အကြုံ, terminal ကိုဒီဂရီမပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များကမ်းလှမ်းမလစာစကေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။
ပိုများသောအလုပ်ရှာဖွေရေး Options ကို
US မှာ, သင်လေ့လာမှု၏တူညီသောလယ်ပြင်၌အနည်းဆုံး 18 ဘွဲ့ရနာရီမပါဘဲကောလိပ်အဆင့်အထိသင်တန်းများသင်ပေးလို့မရပါဘူး။ သို့သော် Ph.D နည်းပညာပိုင်းဆိုလယ်ပြင်၌ကောလိပ်သင်တန်းများသင်ပေးလို့ရပါတယ်။ ပညာရေး၌, မဟာဘွဲ့, အထူးသဖြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးမှ, တိုးတစ်ခုဖန်မျက်နှာကျက်သည်ပေမည်။ terminal ကိုဒီဂရီထက်ပိုသုတေသနမဟုတ်ရင်မရရှိနိုင်ပါသည်တချို့ဓာတ်ခွဲခန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးအပါအဝင် options တွေကိုအဖြစ် Post-ပါရဂူရာထူးပေးထားပါတယ်။
တစ် Ph.D ဘွဲ့ကိုရှိခြင်း, သင့်နာမည်ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ '' ဆရာဝန် '' ရတဲ့အပြင် အထူးသဖြင့်သိပ္ပံနှင့်ပညာရေးစက်ဝိုင်းထဲမှာလေးစားမှုလူတယောက်အဆင့်ကိုပညတ်တော်မူ၏။ တစ် Ph.D ဘွဲ့ကိုခံစားရသူကိုတစ်ဦးချင်းစီရှိပါတယ် သိပ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူပင်ဤရိုးရာအများအားဖြင့်တစ် Ph.D ဘွဲ့ကို (ကပုံပိုမြင့်ဇောက်ဒီဂရီ) ဟန်ဆောင်ပေမယ့်ညံံ့နေပါတယ် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ကျွမ်းကျင်သူ သူသို့မဟုတ်သူမ၏လယ်ပြင်၌။
သင်တစ်ဦးမာစတာဘွဲ့ရှာကြံနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းထိုသို့ပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ကြားရေးနှင့်သုတေသနထောက်ပံ့ကြေးနှင့်ကျူရှင်ငွေကြေးပြန်လည်များသောအားဖြင့်ပါရဂူကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောကျွမ်းကျင်လုပ်သားများအတွက်လုံးလုံးလြားလြားဆပ်ဖို့တစ်ကျောင်းသို့မဟုတ်သုတေသနစက်ရုံသိသိသာသာပိုပြီးပိုက်ဆံကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျဆရာဝန်တစ်ဦးလိုက်စားမပြုမီမာစတာဘွဲ့ရဖို့ရန်ရှိသည်မခံစားရပါစေနဲ့။ ကွဲပြားခြားနားသောကျောင်းများကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုရှိသည်, ဒါပေမယ့်တစ်ဘွဲ့ဘွဲ့တစ် Ph.D ဘွဲ့ကိုသို့ဝန်ခံဖို့များသောအားဖြင့်လုံလောက်ပါသည် ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ Start ရန်ပိုလွယ်ဒါဟာင်
သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်နိုင်ရန် Terminal ကိုဒီဂရီမလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ယုံကြည်စိတ်ချကြောင်း Ph.D ဘွဲ့ကိုနှင့်တကွကြွလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အကြွေးရရှိမှုသင်တစ်ဦးခြေထောက်တက်ပေးခြင်း။ Lab မှပစ္စည်းကိရိယာများစျေးပေါမဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်သူတို့ကသင်လုပ်နေလုပ်နေအရာကိုသိယုံကြည်မဟုတ်လျှင်လူတွေကိုသင်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မျှော်လင့်ထားဘူး!
တစ် Ph.D ဘွဲ့ကို Get မရန်အကြောင်းပြချက်များ ဓာတုဗေဒအတွက်
ဒီနေရာမှာတစ်ဦး Ph.D ဘွဲ့ကိုရဖို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်များမှာ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကြောင့်နှောင့်နှေးစေရန်:
Long Term အနိမျ့ဝင်ငွေခွန်
တစ် Ph.D ဘွဲ့ကိုသို့သွားမနေပါနဲ့ ပရိုဂရမျသငျသညျပြီးသားသင်ထဲကတွေအများကြီးယူပါလိမ့်မယ်ကတည်းကထွက်ကိုမီးရှို့ခံစားရလျှင်။ သင်စတင်သောအခါအသငျသညျစွမ်းအင်နှင့်အကောင်းတစ်ဦးသဘောထားကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်, သင်ဖြစ်ကောင်းအဆုံးကတဆင့်ကြည့်ရှုမည်မဟုတ်သို့မဟုတ်သင်သည်သင်၏ဘွဲ့ရပေမယ့်ပျော်မွေ့မည်မဟုတ်ပါ ဓာတုဗေဒ တော့ဘူး။
လျှပ်စစ်နှင့် Plasma ဓာတ်ပုံပြခန်း
ပိုတက်ဆီယမ်နိုက်ထရိတ်ဖြေရှင်းချက် Make ရန်ကဘယ်လို
မီတာမှ nanometer ပြောင်းလုပ်နည်း
ဆီးသောက်ရန်ဒါဟာကို Safe ဖြစ်သနည်း
NHL ဥက်ကဋ်ဌ '' ဒိုင်းဆုမကျိန်ဆဲ
ထိပ်တန်း 10 Alanis Morissette သီချင်း Lyrics
အဆိုပါယနေ့ညပြရန် Band: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
အဆိုပါဆွဲထုတ် (သို့မဟုတ်ဆွဲထုတ် Shot) ဂေါက်သီးရိုက်နှင့်ကဘာလဲဒါဟာစေတယ်
ဂျပန်နှုတ်ကပတ်တော်ကို Koishii ဖို့နိဒါန်း
Hola Mohalla ပွဲတော် 11 aspect
ဂျီသြမေတြီ - အလယ်ပိုင်းကိုဖော်မြူလာ
အီတလီအတွက် Tiny နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
VB.NET အတွက်မိတ်ဆွေနှင့် Protected မိတ်ဆွေ
UNC မှ Asheville GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
10 ရယ်စရာအကောင်းဆုံး Celebrity တွစ်တာအမှား
1812 ၏စစ်ပွဲ: ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆာဂျော့ခ်ျPrévost
Chrysanthemum Folklore & မှော်